> Resource > iPad > Sidee si ay u gudbiyaan Faylal ay ka iPad in Android
Qaado badan oo sawiro aad iPad oo aad rabto in lagu wareejiyo si aad telefoon Android ama kiniin. Ku kaydi heeso iyo videos on your iPad badan oo aan la sugi karin in ay u baddashaan qalab Android aad u riyaaqayaa on go ah? Wax kasta oo aad ciidamada, hal shay waa in aad daryeeli ku saabsan yahay sida inuu u wareego. Halkan waxaa ku qoran xal aan ku talinaynaa in aad si.
Free Solution Lacag Xalka - MobileTrans
Photos ku giringiriya Camera ah: iPad Buur sida drive dibadda adag;
Photos in Photo Library iyo iPhoto: hab lama heli karo
Hagaagsan u iibsaday music / videos in Lugood iyo in qalabka Android
Xiriirada nidaameed via Google
Download ay barnaamijyadooda isla Google Play
Faa'iido & Qasaarooyinka
Ma u baahan tahay xoogaa daqiiqo ah
Mid ka mid ah click si ay u gudbiyaan videos oo dhan, sawiro, muusig iyo xiriirada
Qoraallada Warbixiinta oo ay kala soo wareegeen iMessages
Qaadataa waqti badan si ay u baadhaan xal ah
Bedelka mid ka mid ah files by mid ka mid
Ka dib kala iibsiga, music video ama dhici karta in uu ciyaaro
Guul daraystaan ​​in ay barnaamijyadooda ka iPad wareejiyo Android
Xalka 1: Transfer ka iPad in ay si xor ah Android
Solution 2: Switch ka iPad in Android la MobileTrans (dhakhso ah laakiin aan lacag la'aan ah)
Xalka 1: Transfer ka iPad ay si xor ah Android
1. Transfer sawiro ka iPad in phone Android ama kiniin
Waxaa ka mid ah dhammaan faylasha, sawirrada ee iPad Camera Roll waa u fududahay in ay u gudbiyaan. Halkan tago tallaabooyinka.
Buur aad iPad kombiyuutarka sida drive dibadda adag deeruhu in cable USB ah. Waxaa fur oo la helo DCIM folder. Dhammaan sawiro aad qaadato iyo download jiraan.
Connect telefoonka Android ama kiniin in kombiyuutarka la cable USB ah. Sidoo kale, maraan si ay drive adag.
Fur drive ee Android adag oo ay helaan ama abuuro folder sawir.
Copy sawiro ka folder iPad DCIM in aad folder sawir Android.
2. Transfer music iyo videos ka iPad in Android
Waa ay iska cadahay in Lugood kuu ogolaanayaa inaad si ay u gudbiyaan music ka iibsaday iyo videos ka iPad, waxa uu. Sidaas darteed, waxaad raaci kartaa sida marka aad qabto badan music iyo videos in lagu wareejiyo.
Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPad in computer iyo ordi Lugood.
Riix Store > ogolaato Computer Tani iyo talooyin ID Apple iyo password taas oo loo isticmaalayo in ay iibsadaan muusikada iyo videos.
Marka iPad la ogaado iyo muujiyey galeeysid bidix, midig guji aad iPad si ay u muujiyaan liiska hoos-hoos u. Markaas, dooro Transfer iibsaday ... .
Tag warbaahinta Lugood ee folder kombiyuutarka. By default, waxa la badbaadiyey ee C: \_ Users \_ Maamulaha \_ Music \_ Lugood \_ Lugood Media.
Buur telefoonka Android ama kiniin ah sida baabuur USB adag oo paste ka music iyo videos warbaahinta Lugood ee folder.
Waxaad ogaan kartaa in qaar ka mid ah music iyo videos si fiican u ciyaaro aad iPad, laakiin ma ciyaari karaa telefoonka Android ama kiniin ah, sida MOV, M4P, M4R, M4B. Xaaladdan oo kale, aad leedahay si aad u hesho qaar ka mid ah audio iyo video Converter in ay marka hore iyaga loogu badalo.
3. Transfer xiriirada ka iPad in Android
Si aad u gudbiyaan xiriirada iPad in telefoonka ah Android ama kiniin ah, Google nidaameed waa doorasho wanaagsan. Macna ma laha hadii aad iPad waxa macruufka 9/8/7 ama macruufka 5/6, waxay samayn kartaa in aad u.
Marka iPad waxa macruufka 7, fadlan raac tallaabooyinka hoos ku qoran:
On aad iPad, tuubada Settings > mails, Xiriirada, Kalandarada > dar xisaabta > Google .
Buuxi aad info account Google: magaca, magaca isticmaalaha, sirta ah iyo sharaxaad
Tubada Next iyo hubiyo icon Xiriirada waxaa gagadin.
Tubada Save iyo hagaagsan xiriir ah.
Tag telefoonka Android ama kiniin iyo tuubada Goobta .
Dooro Account & hagaagsan iyo buuxi info account ka dibna tubbada nidaameed Xiriirada .
Tubada nidaameed Hadda si hagaagsan xiriirada Google in aad telefoon ama Android kiniin.
Marka iPad waa la macruufka 5 ama 6 macruufka, isku day inaad soo socda:
Tubada Settings on your iPad.
Tubada mails, Xiriirada, Kalandarada > dar xisaabta .
Dooro kale > dar CardDAV Account .
Waxaad ku qortaa info account: Service, magaca isticmaalaha, sirta ah iyo sharaxaad.
Tubada Next on dhankiisii ​​midig sare oo shid Xiriirada .
On telefoonka Android ama kiniin ah, tuubada Goobta > Accounts & hagaagsan .
Waxaad ku qortaa account Google oo ka jaftaa nidaameed Xiriirada > nidaameed Hadda .
Fiiro gaar ah: Halkaan waxaa ku qoran faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan aad iPad syncing la account Google .
Si kastaba ha ahaatee, waxa laga yaabaa in aad niyad waa ma ahan in dhamaan telefoonada Android oo kiniin kuu ogolaanaya inaad si hagaagsan xisaab Google. Taasi micnaheedu waa in, waxaa laga yaabaa in aad uma isticmaali karo hagaagsan Google.
4. Transfer barnaamijyadooda ka iPad in Android
Ma doonayo in aan waayi barnaamijyadooda aad jeceshahay ka dib markii bedesheen ka iPad in Android? Ha welwelin. The Play Google yimaado aad u. Waxaa ugu weyn ee xarunta app download Android ah, taas oo kuu ogolaanaysaa inaad si dhakhso ah u hesho waxa aad doonayso.
Sida Chine ee aad bixisay, waxaad isku dayi kartaa in aad hesho xiriiri sameeysa app ama dukaanka app si aad u aragto haddii aad bedeli kartaa .ipa ah, .pxl, iwm version in .apk version kharash yar.
Xalka 2: Switch ka iPad in Android la MobileTrans (dhakhso ah laakiin aan lacag la'aan ah)
Ku daalay faqri maalin dhan hortooda computer ku baadhi karo oo isku dayaya in xalka lacag la'aan ah oo aad rabto inaad ka heli mid ka mid fudud oo ku habboon? Ayaa qalab kala iibsiga phone xirfad - Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac yahay oo dhan aad u baahan tahay. Just mid click, dhammaan dadka ay khuseyso, sawiro, iMessages, jadwalka taariikhda, video iyo music la demin doonaa ka iPad in Android. Habka kaliya oo dhan waxaad qaadataa daqiiqado yar, taas oo run ahaantii ka badbaadiyay noloshaada.
Download Wondershare MobileTrans u leedahay in isku day ah.
Tallaabada 1. Isku qalabka iPad iyo Android inay kombiyuutarka
Orod Wondershare MobileTrans ee kombiyuutarka iyo isticmaali fiilooyinka USB in ay ku xidhmaan aad iPad iyo Android phone ama kiniin in computer si aad ah. waa Lugood lagu rakibo si loo hubiyo in Wondeshare ka MobileTrans si sax ah u shaqeeyo.
Fiiro gaar ah: Wondershare MobileTrans ayaa si fiican u la shaqeeya telefoonada badan Android iyo murriyado, oo ay ku jiraan Samsung, Google, HTC, Sony, Motorola, LG, Huawei, ZTE, acer, iyo in ka badan .
Tallaabada 2. Nuqul music / photos / videos / iMessages / jadwalka / xiriirada ka iPad in Android
Sida aad ka arki, labada qalab aad Android iyo iPad waxaa lagu muujiyey in uu furmo suuqa hoose. Dhammaan waxyaabaha aad nuqul karo ayaa la hubinayaa. Sidaas darteed, riix Start Copy si ay u bilaabaan kala iibsiga.
Top Software 5 Transfer File Android Waa in aan ogaado
Music Bilaashka ah ee iPad / iPod / iPod shaandheyn
Sida loo Play MTS Faylal ay ku iPad